Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A December 2010 (6)
Q and A December 2010 (6)
1. ဓမ္မတာ လာနေရင် ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးလား
2. ကိုယ်ဝန် ၂ လရှိပါပြီ အရမ်းအန်ချင်ပြီး
3. သမီးရဲ့ ကလေးပါ ယားနာတွေ ပေါက်နေပါတယ်
4. အသားတွေယား ယားနေပါတယ်ရှင်
5. Ibuprofen ကလဲ တခါသောက် ဘက်လောက် mg သောက်ရမလဲ
6. Aspirin 80 mg ကို တနေ့ ၃ကြိမ်သောက်တာ
7. အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီး
8. သစ်သီးတွေကို စားရင်ရော ဗိုက်တာမင်အေ ပြည့်နိုင်ပါသလား
9. ဘီပိုးရှိတဲ့သူဟာ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို
Q 1: မိန်ခလေး တစ်ယောက် ကိုယ်ဝန် နှစ်လလောက်ရပြီဆိုရင် ဘာလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာသလဲ ပြီးတော့ အဲဒီ မိန်ခလေးက ဓမ္မတာ မလာတော့ဘူးဆို ဟုတ်လားဆရာ။ ဓမ္မတာ လာနေရင် ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးလားဆရာ။ သိချင်လို့ဖြေပေးပါဆရာ။
Morning sickness ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ လက္ခဏာများ
ဓမ္မတာလာနေရင် ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဓမ္မတာ ဟုတ်ရဲ့လား သေခြာပါစေ။ ကိုယ်ဝန်ပျက်လို့ သွေးဆင်းတာလဲ ရှိနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၇ဝ-၈၅% တို့မှာဖြစ်တတ်။ ရာသီမဆင်းတော့ပါ။ ဖြစ်တာတွေကတော့ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ရင်သားနာခြင်း၊ ထမင်းစားပျက်ခြင်း၊ ထူထူးခြားခြား တမျိုးမျိုးကို စားချင်စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ အစာအိမ်ပြဿနာပေးနိုင်တယ်၊ အားယုတ်မယ်၊ မကြာခဏ ဆီးသွားမယ်၊ မောပမ်းမယ်၊ တချို့မှာ သွေးနဲနဲ ဆင်းမယ်၊ ရာသီလာတာ မဟုတ်ပါ။ အရင်ကထက် အားအင်ပြည့်၊ အလေးချိန် တိုးမယ်။ အနေအထိုင် ခက်ခဲမယ်။ အရေပြား ပြောင်းလဲမှုများရှိမယ်။ သွင်ပြင် လက္ခဏာတွေနဲ့ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာလည်း ပြောင်းလာတယ်။ တချို့မှာ အကြီးအကျယ် ပျို့-အန်တာဖြစ်တယ်။ ဆေးကုယူရမယ်။
ကိုယ်ဝန်ကို နုသေးရင် Urine for pregnancy test ဆီးစစ်မှရတယ်။ ၁၂ ပါတ် (၃ လ) မရှိသေးဘဲ ဗိုက်ကနေ စမ်းမတွေ့နိုင်သေးပါ။ Vaginal exam မွေးလမ်းထဲ လက်ထည့်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ရင် ၂ လလောက် ရှိကတည်းက သိနိုင်တယ်။ Ultrasound နဲ့ ရှိ-မရှိ သေခြာစေနိုင်တယ်။
Q 2: သမီးအခုကိုယ်ဝန် ၂ လရှိပါပြီ အရမ်းအန်ချင်ပြီး တချိန်လုံးအိပ်ချင်နေပါတယ်။ အစာလဲမစားချင်ဘူး ပြီးတော့ဆရာ သမီးရဲ့အိမ်မှာ ပါပီလေးတစ်ကောင် ရှိပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လား။ ဘာတွေ ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာ အကြံပြုပါအုံးနော်။
A: "ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အန်ခြင်း" ကို ဖတ်ပါ။ အိမ်မွေး အကောင်တွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ တည့်ရင် ကိုယ်ဝန်ကို ဘာမှမဖြစ်စေနိုင်ပါ။ တည့်တယ်ဆိုတာ Allergy (အလာဂျီ) မရတာကို ပြောတာ။
2010/12/15 tha zin
Q 3: ဆရာရှင့် သမီးအသားတွေယားတာ မပျောက်သေးပါဘုးရှင်။ ဆရာပေးတဲ့ Calamine lotion လိမ်းပါတယ်။ Citrizine ဆေးလဲ သောက်ပါတယ်။ အခုထက်ထိ မပျောက်သေးပါဘူးရှင်။ သမီးအသက်က 38 ပါ။ သမီးရဲ့ ကလေးပါ ယားနာတွေ ပေါက်နေပါတယ်။ သမီးအမျိုးသားပါ ယားနာတွေလိုပေါက်နေပါတယ်။ အဖုလေးတွေက တော်တော် ကုတ်လို့လဲ ကောင်းပါတယ်။ ညဘက်ဆို ပိုယားပါတယ်။ လက်ကြားတွေမှာပါ အဖုလေးတွေ ခလေးရော သမီးပါ ပေါက်လာပါတယ်။ သမီးက်ို ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်နဲ့ သောက်ရမဲ့ဆေးတွေပါ ပေးပါ။ ယားလို့ကုတ်ပြီး ဆေးလူးရင် သက်သာပါတယ်။ နောက်နေ့ ပြန်ယားပါတယ်။ ဖြစ်နေတာ3ပတ်လောက်ရှိနေပါပြီ။ ဆရာဝန်သွားပြတော့ လိုးရှင်း ပေးပါတယ်။ သောက်ဆေးတွေ ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သောက်ဆေးက အစာအိမ်အတွက် ထိမှာစိုးလို့ အစာအိမ်အတွက် ဆေးပါ သောက်ရမယ်ဆိုလို့ သမီး မသောက်ပါဘူး။ (လိုးရှင်း) တော့ လူးပါတယ်။ Gentalic lotion ပါ သက်သာသလိုနဲ့ မပျောက်ပါဘူး။
A: ယားနာ ဖြစ်နေရင်တော့ စောစောကဆေးတွေနဲ့ မရပါ။ Sacbies ယားနာအတွက် ဝယ်ရမဲ့ဆေး တနေရာနဲ့တနေရာ မတူဘူး။
• Benzyl benzoate ဆေးရည်က ယားနာ (ဝဲ) နဲ့ သန်း ပျောက်တယ်။ ကလေးလဲလိမ်းနိုင်တယ်။ ပါးစပ်ထဲ မဝင်စေနဲ့။ ဆေးလိမ်းပြီး ဝတ်တဲ့ အဝတ်အစား တည၊ ဒါမှမဟုတ် တရက် မချွတ်ဘဲနေပါ။ နောက် ရေချိုးပါ။ ပျောက်တဲ့အထိ ထပ်လိမ်းပါ။
• Permethrin (Elimite) လိမ်းဆေး နေရာအနှံ့လိမ်းပါ။ မနက်လင်းရင်ရေချိုးပါ။ ကလေး ၂ လသားကနေ စသုံးနိုင်တယ်။
• 1% lotion of Lindane လိမ်းဆေး လိမ်းပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မသုံးရပါ။ အသက် ၂ နှစ်အထက် သုံးနိုင်တယ်။
• Crotamiton lotion 10% and cream 10% (Eurax, Crotan) လိမ်းဆေး ကလေးမဟုတ်ရင် သုံးနိုင်တယ်။
24 Nov 10, 20:46
Q 4: ကျွန်မ အသားတွေယား ယားနေပါတယ်ရှင်။ လေအေး ထိရင်ပိုယားပါတယ်။ မကုတ်ရင် အဖုမတွေ့ရဘူး။ ကုတ်မှ အဖုလေးတွေထွက်လာပါတယ်။ ကုတ်မိရင် ပိုယားလို့မဆုံးတော့ပါဘူး။ ပခုံးမှ ပေါင်အထိ ယားပါတယ်။
A: ဖြစ်တဲ့သူ အသက်။ ဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ ဘယ်ဆေးသောက်နေလဲ။ သက်သာလား။
(အလာဂျီ) ဖြစ်တာပါ။ မတည့်တာပေါ့။ မတည့်တယ်ဆိုတာ ရာသီဥတု၊ အစားအသောက်၊ အနံ့အသက်၊ ဆေးဝါးတွေကနေ ဖြစ်စေတတ်တယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူကြဘူး။
ဖြစ်ရင် ယားမယ်။ အနီပြင်ထွက်မယ်။ ဒိထက်ဆိုးသူတွေမှာ ဆီးသွားချင်၊ ဝမ်းသွားချင် ဖြစ်လာမယ်။ ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်မယ်။ စိတ်ရှုတ်လာမယ်။ အသက်ရှူတာ၊ နှလုံးခုန်တာ ပြောင်းလာမယ်။ သတိချို့ယွင်းလာမယ်။ အဆိုးဆုံးက (ရှော့ခ်)ရမယ်။ ယားတဲ့အဆင့်ဆိုရင် စားဆေးနဲ့ရတယ်။ (အင်တီဟစ်တမင်း) Antihistamine (Cyclizine, Cinnarizine, Meclozine Hydrochloride, Promethazine) ဆေး တခုခု သောက်ရတယ်။ နာမည်တွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ လာမယ်။
Hydroxyzine 25 mg တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်သောက်နိုင်တယ်။ စိတ်ငြိမ်စေချင်ရင်၊ အိပ်စေချင်ရင် 50 to 100 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်အထိ သောက်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ခေါင်မူး၊ အိပ်ချင်၊ မျက်စိဝါး၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ မျက်လုံး-မေး-လျှာ-လည်ပင်း ကြွက်သားတွေ လှုတ်ခြင်း၊ လက်တုံ၊ စိတ်မရှင်း၊ တက်ခြင်း။
Cetirizine ဆေးကို အများဆုံး သုံးတယ်။ (အလာဂျီ) ရရင် ကိုယ်ထဲက အလိုလိုထွက်လာတဲ့ Histamine ကြောင့် လူဟာ နှာခြေ၊ ယားယံ၊ မျက်ရည်ယို၊ နှာရည်ယို၊ ဖြစ်မယ်။ အအေးမိ လက္ခဏာတွေပါဘဲ။ တချို့မှာ အနီပြင်တွေ ထွက်မယ်။ ဒီဆေး သောက်ရင် ကားမမောင်းသင့်ဘူး တွေးတောတာကို ထိခိုက်တယ်။ အရက် ရှောင်ရမယ်။
FDA က ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက် pregnancy category B သတ်မှတ်တယ်။ ကလေးကိုမထိခိုက်ပါ။ နို့တိုက်နေရင်လဲ နို့ထဲပါစေမယ်။ ဆေးကို အစာနဲ့ နီးနီး-ဝေးဝေးသောက်နိုင်တယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက နှလုံးခုန် မြန်စေတယ်။ အားယုတ်တယ်၊ အအိပ်ပျက်တတ်တယ်။ စိတ်လှုတ်ရှားမှု ပိုတယ်။ စိတ်မရှင်းဖြစ်မယ်၊ မျက်စိကြည့်တာကို သက်ရောက်တယ်။ ဆီးသွား နည်းစေတယ်။ အာခေါင်ခြောက်တယ်။ ဝမ်းချုပ်တတ်တယ်။
ယားတဲ့နေရာကို Calamine lotion လိမ်းနိုင်တယ်။ တော်တော့ဟာကို ဆေးမသောက်ဘဲ သက်သာစေနိုင်တယ်။
Q 5: ဆရာရှင့် နံနက်အိပ်ရာထလျှင် လက်ချောင်းများ တင်းပြီး ကွေးမရပါ။ အဆစ်နေရာက ပူနေပါသည်။ သက်သာရန် မည်သည့် ဆေးများသောက်ရမည်နည်း။ ESR 53 ဖြစ်နေလို့။ လက်ဆစ်ရောင် တာကျချင်လို့။ Ibuprofen ကလဲ တခါသောက် ဘက်လောက် mg သောက်ရမလဲ။
A: Ibuprofen ကလဲ တခါသောက် ၁ ပြား၊ အစာနဲ့နီးသောက်။ တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်သောက်ရတယ်။ တချို့ရောဂါတွေက ဒိထက်ပြင်းတဲ့ဆေးလဲ ပေးရတယ်။ ဘာအတွက် မေးတာလဲ မသိတော့ ခက်နေတယ်။ လူကြီးအတွက် အများဆုံး Ibuprofen တခါသောက် 800 milligrams တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း တနေ့ 3200 mg per day
Q 6: Aspirin 80 mg ကို တနေ့ ၃ကြိမ်သောက်တာ အရောင်မကျသေးပါ။ Ibuprofen ပြောင်းသောက်ရမလား။ ဘယ်လောက် mg သောက်ရမလဲ။ တနေ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ် သောက်နိုင်ပါသလဲ။ Aspirin က အဆစ်ရောင် ကျစေပါသလား။
A: Aspirin က သတ္တိ သုံးမျိုး ရှိတယ်။ ၁။ ကိုယ်ပူတာ ကျစေတယ်။ ၂။ ရောင်နေတာ လျော့စေတယ်။ ၃။ နာတာ-ကိုက်တာ သက်သာစေတယ်။
Aspirin dosage for Aches and Fever ကိုယ်ပူ၊ ကိုက်ခဲ၊ နာကျင်၊ အဆစ်နာ၊ = လူကြီး 300-1000 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်။ အတိုး-အလျော့ လုပ်နိုင်သည်။
Aspirin dosage for Heart Health နှလုံးရောဂါအတွက် = တနေ့ 75 mg daily မှ 325 mg အထိပေးသည်။
Aspirin dosage for Acute MI ရက်တို နှလုံး-အဆို့ရှင် မကောင်းသည့်ရောဂါ = တနေ့ 160 မှ 325 mg daily ရက် ၃ဝ ဆက်တိုက်သောက်ပါ။ လိုအပ်လျင် နောက်ထပ် ရက် ၃ဝ ဆက်သောက်ပါ။
Aspirin dosage for Anticoagulant သွေးမခဲစေလိုခြင်း = တနေ့ 75mg
Q7A: ကျမ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီး ၁နာရီအတွင်းမှာပဲ Ecee-2 ၁ လုံးသောက်လိုက်တယ်၊ ၁၂ ခြားမှာ
နောက်တလုံး ပြန်သောက်ဖို့ မေ့သွားခဲ့တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လားဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။
Q7B: နောက်တစ်ကဒ် ecee-2 ထပ်ဝယ်ပြီး ၇၂ နာရီအတွင်းမှာပဲ ဆိုရင် နောက် ၂ လုံး သောက်လို့ ရသေးလား။
A: အတိအကျ ပြောမရပါ။ ဆီးစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ရပါတယ်။ သွေးဆင်းတာ ပုံမမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်။
18 Dec 10, 04:43
Q 8: ချက်ပြုတ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားဖို့ အဆင်မပြေရင် သစ်သီးတွေကို စားရင်ရော ဗိုက်တာမင်အေ ပြည့်နိုင်ပါသလားခင်ဗျာ။ သက်သတ်လွတ်ကို အာဟာရပြည့်အောင် ဘယ်လိုစားရပါမလဲ။
A: သက်သတ်လွတ်အကြောင်း သပ်သပ် ရေးပါမယ်။ အရောင်ပါတဲ့ အသီးတွေမှာ ဗီတာမင် အေ ပါတယ်။ သင်္ဘောသီး၊ ကြက်ဥ အဝါမှာလဲပါတယ်။ မုံလာဥဝါကို ရေဆေးပြီး အစိမ်းစားနိုင်တယ်။
20 Dec 10, 20:34
Q 9: ဘီပိုးရှိတဲ့သူဟာ ဒိန်ချဉ်သောက်လို့ အဆင်ပြေပါသလား။ ဘီပိုးရှိတဲ့သူဟာ ဘယ်လို အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ရပါသလဲ။ ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီဝေဒနာ ခံစားနေရလို့ပါ။
အသဲမှာ ရောဂါဖြစ်ရင် ဆီ-အဆီ ကို အစာကောင်းကောင်း မခြေနိုင်လို့ လျှော့စားစေတယ်။ အဆိပ်အတောက်တွေလဲ ခြေဖျက်တာ အားနည်းနေလို့ ပြင်းတဲ့ဆေး၊ အစားနဲ့ အသောက်တွေ ရှောင်ခိုင်းတယ်။ နွားနို့လုပ်တဲ့ ဒိန်က ပြဿနာမရှိပါ။
ဘီပိုးတွေ့ထားယုံနဲ့တော့ အသဲမကောင်းတော့ဘူး မဟုတ်သေးပါ။
• ရေအများကြီး သောက်ပါ။ အရည် အများကြီး သောက်ပါ။
• Acetaminophen ဆေးရှောင်ပါ။ ဆေးနာမယ်တွေ အမျိုးမျိုးရှိတာ သိပါ။
• တခြား ဆေးတွေ သောက်ရင် Side-effects ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို အရင်ဖတ်ပါ။ အသဲကို ထိခိုက်စေမယ်လို့ ပါရင် မသောက်ပါနဲ့။
• အရက်ရှောင်ပါ။ ဖြတ်ပါ။
• အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် စားပါ။
o Balanced diet မျှတတဲ့အစာ ဖြစ်ရမယ်။
o အတော်များများက စားချင်စိတ် ကဲနေတတ်တယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင် စိတ်အလို သိပ်မလိုက်ပါနဲ့။
o ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်နဲ့ စားတာ မျှတပါစေ။
o အသီးအရွက်၊ အသီးအနှံတွေ စားလို့ရပါတယ်။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဖြစ်ပါစေ။ ပြုပြင်-စီမံတာတွေက စိတ်မချရတတ်ပါ။
• လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ မလွန်စေပါနဲ့။
• Liver tonic, Liver Extract ခေါ်တဲ့ အသဲအားဆေးတွေ အမျိုးမျိုးတော့ ရှိတယ်။
o အများဆုံးက ရိုးရာဆေး၊ အာယုဗေဒဆေး၊ ဟိုမီယိုပက်သစ်ဆေး၊ ဟာဗယ်ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
o အိန္ဒိယမှာ ဈေးချိုချိုနဲ့ သုံးနိုင်တာက Liv-52 ဆေးဖြစ်တယ်။ Herbal နဲ့ Ayurvedic ဆေးဖြစ်တယ်။
o အရင်က ဗမာပြည်မှာ Tiovit ဆိုပြီး ထုတ်တာက အသဲအတွက်ကောင်းတဲ့ ဗီတာမင်တွေ ပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 9:07 PM